Bit By Bit - Ukuqwalasela ukuziphatha - 2.4 izicwangciso zophando
Njengoko ezi mpawu alishumi imithombo yedatha enkulu kunye iqulunqeke data nokuba waphawula ngokugqibeleleyo, hlobo luni izicwangciso uphando luncedo? Oko kukuthi, ukuba singafunda xa musa sikucele imibuzo kwaye musa ukubaleka imifuniselo? Kusenokubonakala ngathi abantu nje ukubukela ababa kukhokelela umdla ngophando, kodwa oko akunjalo.
Ndibona izicwangciso ezintathu eziphambili ngenxa ukufunda data lokuqwalasela: izinto zokubala, izinto ngempumelelo, kwaye approximating imifuniselo. Ndiza ukuchaza nganye kwezi ndlela-leyo kuthiwa "izicwangciso uphando" okanye "iiresiphi uphando" -yaye Ndiza ukubonisa nabo imizekelo. Ezi zicwangciso ayikukuba efanayo okanye aludinisi, kodwa hlasi kakhulu uphando data lokuqwalasela.
Yayingaz amabango ezilandelayo, ukubala izinto eyona nto ibalulekileyo xa empirically yokugweba phakathi uqikelelo kwiingcingane ezahlukeneyo. Nokuqikelelwa, kwaye ingakumbi nowcasting, kunokuba luncedo kubenzi-nkqubo. Okokugqibela, data enkulu kwandisa amandla ethu ukwenza uqikelelo nakuyo evela data lokuqwalasela.